Wasiirka Wasaarada Deeganka oo tobabar usoo xidhay qaar kamida shaqaalaha Gobalada ee wasaarada deeganka
Mashruuca Awood dhisidda maamulka Wassaradda, dhul-daaqsimeedka iyo kaymaha waxaa fuliya wasaarada deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxaana laga maal galinayaa sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.
Ujeedada mashruucan ayaa ah Tayaynta shaqaalaha Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer miyaga iyadoo la tababarayo shaqaalaha wasaarada deeganka iyo dhismayaasha xafiisyada gobolada (Xarunta Hargeeya, Berbera, Boorama, Burco, Laascaanood, Ceerigaabo Saylac iyo Sheekh.)
hadaba Wasiirka Wasaarada Deegaanka iyo Horumarinta Reer miyiga Somaliland ayaa maanta waxay usoo xidhay 15 kamida shaqaalaha gobolada ee wasaarada deeganka oo mudo 18 cisho tobabar uga socday xarunta wasaarada deegaanka
Xafladan lagusoo xidhayay tobabarka ayaa waxaa ay ka qabsoontay xarunta wasaaradda deegaanka ee gobalka maroodijeex,waxaana kasoo qayb galay dhamaan shaqaalaha dhamaystay tobabarkan .
Shaqaalahan ayaa waxaa lagu tobabarayey maaraynta iyo maamulka dhul daaqsimeeyada,Tobabrkan ayaa waxaa laga maal galinayaa sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF,waxaana uu ka mid yahay tobabarada kor loogu qaadayo aqoonta iyo garaadka shaqaalaha wasaarada deegaanka iyo horumarinta Somaliland.
Ujeedada tobabrkan ayaa ah sidii aqoon buuxda ay shaqaalahu ugu yeelan lahayeen maamulka iyo maaraynta dhul-daaqsimeedka .
Wasiirka waasaarada deegaanka iyo horumarinta reer miyiga marwo shukri xaaji ismaaciil Baandare ayaa kula dardaarantay shaqaalaha qaatay tobabarkan inay uga faa,ideeyaan aqoonta ay barteen deeganada iyo gobalada ay ka kala yimaadeen waxaana hadaladeedii kamid ahaa “ujeedada tababarkani waxaa weeyi fursad inaynu siino gobalada maxaa yeelay qofka halkan jooga kama shaqayn karayo gobalada sida ceerigaabo sool iyo gobalada kaleba,markaa waa inaynu xoojinaa dadka halkaa ka shaqeeya, lagulana xisaabtamo hadhaw oo lagu dabagalo wixii ay barteen iyo cilmigii ay barteen waxay ku qabteen ,waxaana laydinkasugayaa inaad idinku sii tobabartaan dadka kale sida dadka ilaaliya kaymaha "
Sidoo kale waxaa isna dareenkiisa ka waramay khabiirkii bixinayey tababarka sida uu ugu faraxsan yahay inuu tobabar u qabto shaqaale da,yar waxaanu kula dardaarmay inayna la seexan aqoonta ay barteen ee ay uga faa,ideeyaan bulshada reer Somaliland .
Dhanka kale waxaa iyaguna dareenkooda ka waramay shaqaalahan qaadanayey tobabarka waxayna ka warameen aqoonta ay ka faa,ideen ,dhankooda balan qaaday inay uga fa,idayn doonaan gobaladii ay ka kala yimaadeen.
Daahir Ahmed Qolanbi waxaa uuu ka mid yahay shaqaalaha qaadanayey tobabarkan waxaa uu ka waramay sida ay u arkaan tobabarkan iyo waxyaabaha ay ka fa,ideen mudadii uu socday tobabarkani waxana hadaladisii ka mid ahaa "waxaan odhan lahaa tabarkani wuxuu ahaa tababar aad u qaaliya macalimiinta bixinaysayna ay ahaayeen macalimiin lasoo xulay,khabiirkan tababarka nasiinayey wuxuu nooga faa,ideeyey labada wadan ee Somaliland iyo Sudan wax yaabaha ay iskaga midka yihiin maadaamo oo ay cimiladoodu isku dhaw dahay ,waxaan ku baraney sidii loo dajinlahaa istiraatijiyada daaqa ,waxaanu balan qaadaynaa inaan ku celindoono wixii aan halkan ka baranay gobaladii aan kakala nimid.”
Xafladda Furitaanka Mashruuca Dib u dhiska Waddada isku xidha Xamaas - Hargeysa
Dawladda Somaliland waxa ay maanta si rasmi ah u furtay mashruuc lagu dayac tirayo waddada isku xidha Xamaas - Hargeysa, mashruucaasi oo laga maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF). Waxa Mashruuca furitaankiisa si rasmi ah ugaga dhawaaqay tuulada Xamaas Madaxwaynaha Jamuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”.Waddada isku xidha Berbera iyo Hargeysa waxa la sameeyay todobaatannadii waana waddo halbowle ah oo dekedda Berbera ku xidha Hargeysa illaa xuduudda Itoobiya.
Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka (RDA) ayaa dhawaan soo gebo-gebeysay dayactirka 100 kilomitir oo kamid ah islawaddadan inta u dhaxaysa tuulada Xamaas illaa Sheekh. Dayactirkaas waxaa kamid ahaa dib-udhiska biriishka Huddusa. Wakaaladdd Horumarinta Waddooyinku waxa ay sidoo kale dayactir kusamaysay 20.6 kilomitir oo ah inta u dhaxaysa Degmada Dila iyo Kalabaydh oo ay marto wadada isku xidha Hargeysa iyo Borama. Mashaariicdan dayactirka waddooyinka waxaa laga maalgeliyey Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) Dayactirkani waxa uu waxweyn kataray xaaladda waddada iyada oo ay yaraadeen shilalkii baabuurta, sidoo kalena uu soo gaabtay wakhtigii isusocodka magaalooyinku, iyo iyada oo uu kayaraaday gaadiidleyda kharashkii kaga bixijiray dayactirka.
Mashruucan maanta la dhagax-dhigay waxaa isna laga maalgelinayaa Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) waxaanu dayactirk kusamayn-doonaa 30 kilomitir oo katirsan inta u dhaxaysa tuulada Xamaas iyo Hargeysa. Waxaa larajaynayaa in dayactirkani waxweyn kataridoono xaalladda waddada islamarkaana ay yaraan doonto wakhtiga isusocodka magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. Mashruucan waxaa lagu fulindoonaa muddo 8 billood gudohood ah, marka la dhamaystiro waxay noqonaysaa guud ahaan waddooyinka ay Wakaaladda Horumarinta Waddooyinku dayactirtay 130 kilomitir oo laga maageliyey Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF)
Madaxweynaha oo madal si weyn loo soo agaasimay, laguna qabtay ballaysimada dhismaha jidka ayaa ku dheeraaday ahmiyada ay jidadku u leeyihiin horumarka dalka, isgaadhsiinta iyo guud ahaanba isu socodka dadka. Waxa kaluu madaxweynuhu ka hadlay, siday uga go’an tahay waxka qabashada jidadka guud ahaan dalka, gaar ahaan kuwa gobolka saaxil oo uu ku tilmaamay kuwo halbowle ah isku xidhka dalka, siiba marsada caalamiga ah ee Berbera iyo waddanka intiisa kale iyo isku xidhka Somaliland iyo Wadamada Jaarka, Madaxweynaha hadalkiisa waxa ka mid ahaa “Farxad weynbay maanta ii tahay in aan ka soo qaybgalo dhagax-dhiga iyo dayactirka jidka Xamaas Iyo Hargeysa. Wadadaasi waa waddo aad iyo aad muhiima u ah, isgaadhsiinta qaranku waa waxyaalaha ugu mudan ee dadku u baahan yahay, maanta waxaynu ku faanaynaa inaynu dalkeenii dhisanayno, inaynu waddooyinkeenii dhisanayno, oo aynu isgaadhsiinteeni horumarinayno oo ah waxa ay dawladu culayska weyn saarayso ee ay ku tallaabsanayso. Xamaas iyo wadada aynu dhisayno maanta, isgaadhsiinta ayey door weyn ku leedahay, waxan ilaahay ka baryeynaa inuu inagu guuleeyo oo ay noqoto mid aynu ku faa’iidsano. Dawladuna wax Alle wax ay kala hadhaysaa ma jirto, itaalkeeda wixii ay qaban karto dawladu way qabanaysaa, insha Allaa ilaahay ha inagu guuleeyo”.
Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Mudane Cali Xasan Maxamed isaga oo kahadlaya muhiimadda waddadani u leedahay qaranka, ayaa wuxuu yidhi “ Waxaan marag uga ahay qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland in lacagtii cashuur-bixiyayaasha lagu maalgelgeliyey waddooyin muhiim u ah kaabayaasha dhaqaale. Waxaan ku faraxsanay in maanta ladhagax-dhigayo dayactirka waddada Xamaas – Hargeya, tani waxa ay wax weyn kataridoontaa yareynta shilalalka gaadiidka”
Wasiirka Qorsheynta Qaranka Mudane Cali Ismaaciil Xuseen ayaa isna dhiniciisa u mahadceliyey qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) “Aniga oo kuhadlaya afka dawladda Somaliland, Waxaan uga mahadcelinayaa qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland taageeradooda joogtada ah ee horumarka Somaliland. Mashruuca waddadu waxa uu muhiim u yahay horumarka ganacsiga ee Somaliland iyo wadamada jaarka, gaar ahaan Itoobiya”
Sanduuqa Horumarinta Somaliland
Sanduuqa Horumarinta Somaliland waa deeq lacageed oo loogu talo galay in lagu caawiyo dawladda Somaliland kaas oo socon doona muddo afar sanno ah. Sanduuqa waxa loogu talo galay inuu qayb ka noqdo qorshaha shanta sanno ee dhinaca horumarinta Somaliland. Sanduuqa waxa maalgaliyay Hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dawlada Ingiriiksa (DFID), hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dalka Denmark (DANIDA) iyo Dawladaha Norway iyo Netherlands.
Wasiirada wasaaradaha caafimadka iyo wax barashada oo si wada jira u dhagax dhigay bilowga dib udhiska cisbitaalka iyo Dugsigii hoyga ahaa ee magaalada Lasaanood
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Mudane Salebaan Ciise Axmed (Xaglo toosiye) iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdillahi Ibrahim Habane (Cabdillahi-dheere) ayaa manta si wada jira u dhagax dhigay dib udhiska iyo qalabeynta cisbitaalka guud ee iyo Dugsigii hoyga ahaa ee magaalada Laascaanood.
Xaflad lagu dhagax dhigayey bilowga mashaariicdan ayaa waxay ka qabsoontay magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay Madax ay ka mid yihiin Wasiirada wasaaradha Waxbarashda, Caafimaadka, agaasimaha guud ee machadka tobabarka shaqaalaha dawlada, Maayarka magaalada Lascaanood, badhasaab ku xigeenka, saraakiil ka socotay ciidama qaranka, booliska, shirkadaha ku guulaytay qandaraasyada dhimaha mashaariicdan iyo bulshada ku nool degmada laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Cibtitaalkan guud ee magaalada laascaanood ayaa waxaa ladhisay sanadihii 1945-1947kii tan iyo xilligaana dayactir wax ku ool ah marna laguma sameynin. Taasina waxay sababtay in cisbitaalku kafeyn waayo baahiyaha caafimaad ee gobolka iyo magaalada. Waxa istaagay inta badan adeegyadii caafimaad ee uu cisbitaalku bixinjiray bukaankana waxa looqaadaa magaalooyinka Buco iyo Hargeysa oo masaafo aad ufog kuyaal. Mashruucan waxa uu dib udhis iyo tayactir ku sameyn doonaa dhismayaasha cisbitaalka iyadoo lana qalabeyndoono. Waxa la dhisi doonaa habmaamulka iyo tayada shaqaalaha ka howlgala cisbitaalka si ay u siiyaan adeeg caafimaad oo hufan bulshada ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan Magaalada Laascaanood.
Mashaariicdan la dhagax dhigay waxa isna ka mid ah mashruuc dhanka waxbarashada ah kaas oo dib udhis iyo qalabayn ku sameyn doona Dugsi hoy (boodhin) ah kuna yaal magaalada Laascaanood. Dugsigan taariikhiga ah oo ay ka aflaxeen dad farabadan wakhtiyadii uu shaqeenayay ayaa burbursanaa muddo.
Intii ay socotay xafladdan lagu dhagax dhigayey mashaariicdan horumarineed ayaa waxa ka hadlay wasiirka wasaarada caafimaadka Mudane Saleeban Ciise Axmed (Xaglo toosiye) waxaanu ka waramay muhiimadda uu leeyahay cisbitaalkan magaalada Laascaanood isagoo tibaaxay in uu mashruucu ka koobnaan doono dib udhiska dhismayaashii hore, iyo dhisidda kuwo cusub sidoo kalena waxaa uu sheegay in la keeni doono dhakhaatiir khibradleh oo ay ka mid yihiin dhakhtarka qalliintka, suxiyi, iyo dakhtarka dumarka. Wasiirka oo la dar daarmaya bulshada ku dhaqan gobalka Sool ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweeyaan shirkadaha ku guulaystay dhismaha cisbitaalka iyo dugsiga lana shaqeeyaan dadka ka shaqaynaya cibitaalka.
Wasiirka wasaarada wax barashada mudane Cabdilahi Ibrahim Habane ayaa dhankiisa ka hadlay munaasibadan waxaanu ka waramay muhiimada uu leeyahay dib udhiska iyo soo noolaynta dugsigan taariikhiga ah sheegayna in mudo laba sano ah ay gacanta ku hayn doonaan Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.
Waxaa sidoo kale ka hadlay munaasibadan maamulayasha labada mashruuc oo dhankooda ku booriyey bulshada reer Laascaanood inay soo dhaweeyaan cid kasta oo ka hawlgaleysa horumarinta gobalka Sool.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) waa deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo Dawladda si ay u hirgeliso Qorshaha Horumarinta Qaranka (National Development Plan). Sanduuqa waxa maalagalinaya Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah u qaabilsan dawalda Ingiriiska (DFID), Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah u qaabilsan dalka Denmark (DANIDA), dawladaha Norway iyo Netherland.
Wasiirada Wasaaradaha Waxbarashada iyo Caafimaadka oo si wada jir ah u gudoonsiiyey Shahaadoyin 25 ka mida shaqaalaha dawlada ee gobalka sool
Wasiiradda wasaaradaha waxbarashada iyo Caafimaadka ayaa si wada jira u gudoon siiyey shahaadooyin 25 kamida shaqaalaha wasaaradaha waxbarashada,Caafimadka iyo Qorshaynta ee gobalka sool oo mudo 7 bilood ah baranayey maaraynta iyo maamulka mashaariicda .
Xaflad lagu soo xidhay tobabarkan ayaa waxaa ay ka qabsoontay hall-ka shirarka wasaaradda caafimadka ee magaalada laas-anood ,waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaarada waxbarshada Md C.laahi Ibraahim habane, wasiirka wasaarada caafimadka Md Saleeban Ciise Ahmed(Xaglo –toosiye ),Maayarka Magaalada Las-canood ,badhasaab ku xigeenka gobalka Agaasimaha Guud ee Machadka Tobabarka shaqaalaha dawlada Guiled Omar ,saladiin bulshawaynta ku nool magaalada laas-canood iyo shaqaalaha wasaaradaha qorshaynta,caafimadka iyo wax barashada ee gobalka laas-canood
Ujeedada tobabarkan ayaa ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa tayada aqooneed ee shaqaalaha dawlada Somaliland waxaana laga maal galinayaa sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF Waxaana fulinaya Machadka tobabarka shaqaalaha dawlada Somaliland ee CSI.
Intii xafladu socotay waxaa lasoo bandhigay mashaariic kala duwan oo ay diyaariyeen wasaaradihii qaadaneyey tobabarkan .
Ugu horayn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee machadka tobabarka shaqaalaha dawlada mudane Gulled Omer waxaana uu ka waramay ujeedada tobabrkan iyo dadaalka ay ugu jiraan sidii ay shaqaalaha dawladu unoqon lahaayeen shaqaale tayo leh
Sidoo kale waxaa isna madashasi ka hadlay wasiirka wasaaradda Caafimadka mudane Saleeban Ciise Ahmed (Xaglo toosiye)ayaa isna dhankiisa kula dar daarmay shaqalaha tobabarkan qaatay inay bulshada uga faa,ideeyaan aqoonta ay barteen,dhanka kalena umahad celiyey shaqalahu sida fiican ee ay u dhamaysteen tobabarkani.
Dhanka kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaarada waxbarasha Mudane C.laahi Ibraahin habane ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa “ujeedada loo tababarayo shaqaalaha wasaarada caafimadka ,waxbarashada iyo qorshayntaba waa sidii loo heli lahaa maamul fiican”sidoo kalena waxaa uu kula dardaarmay shaqaalaha inay dadaalka halkaasi ka si wadan oo ay u shaqeeyaan qaranka si horumar loo gaadho .
Gabagabadii xafladan waxaa shahaadooyin la gudoon siiyey xubnihii dhamaystay tobabarkan sidoo kalena waxaa abaal marino la gudoonsiiyey wasaaradihii iyo xubnihii ugu dhibcadaha badnaa imaanshaha tobabarka
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta ayaa Xafiiskiisa ku Qaabilay Wafti ka socda Hay’ada USAID
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Mud. Cali Xuseen Ismaaciil Jirde ( Cali Shoombe) oo uu weheliyo Wasiirku-xigeenka Wasaaradda Qorshaynta Mud. Kaysar Cabdilaahi Maxamed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafti uu ka kooban Agaasimaha Hay’ada USAID ee Somaliland iyo Somalia
Tyler Beckelman iyo masuuliyiin ka socota hay’ada USAID oo ay ka mid yihiin Madaxa xafiiska Siyaasadda iyo Sarkaal sare oo ka tirsan Xafiiska Xasilinta dhaqaalaha ee Hay’adaasi, ayaa kulanka ay la yeesheen Wasiirka iyo ku-xigeenkiisa waxa la isku waydaarsaday xogo ku saabsan mashaariicda kala duwan ee ay Hay’ada USAID ka wado dalka. Waxa kale oo ay ka wada hadleen labad dhinac sidii ay hay’ada USAID uga qayb qaadan lahayd hirgalinta Qorshaha Horumarinta Qaranka ee shanta sano ee soo socda. Gabagabadii shirka waxay la isla qaatay sii xoojinta wada shaqaynt labada dhinac.
Dufcadii 2aad ee mashruuca awood dhisida shaqaalaha dawlada (CSP2) oo ka qalin jabiyey macadka tobabarka shaqaalaha dawlada
Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo Furtay Dhamaystirka Mashruuca Biya Gelinta Xaafadaha Ayaha 1 &2 ee Hargeysa
Madaxweynaha JSL oo furay Shirka 9aad ee isuduwidda Mucaawinooyinka Somaliland